Akkaataa Bootstrap gara CodeIgniter dabaluu dandeenyu - Barataa Technologies - Giddu Gala barnootaa fi Odeeffannoo
Akkaataa Bootstrap gara CodeIgniter dabaluu dandeenyu
By Alifu Haji	CodeIgniter, PHP July 13, 2019
Maxxansa kana keessatti akkaataa Bootstrap gara codeigniter dabaluudhaan itti fayyadamuu yookiin gargaaramuu dandeenyu wajjiin ilaalla. Codeigniter hin beektan yoo tahe, codeigniter’n fireemwoorkii php kan marsariitilee gara garaa hojjachuuf nu tajaajiluudha.
Marsariitilee gara garaa hojjachuuf yoo barbaaddu yoo tahe, osoo codeigniter fayyadamtanii isiniin jedha. sababni isaa codeigniter adeemsota walxaxoo heddu salphisee jira waan taheef. Isatti fayyadamuuf dura CodeIgniter gara marsariitii isaanii deemuudhaan buufachuu qabdu.
Erga buufattanii booda, extract gochuudhaan gara server keessanii xamp yookiin wamp dhatti fiduu qabdu. Yoo xamp fayyadamtu tahe gara qabee htdocs jedhuutti geessitu. Yoo wamp fayyadamtu tahe immoo gara qabee www jedhutti geessitu. Ergas booda iyya’aa/browser keessatti localhost/ci jechuudhaan soqi. Ati maqaa folder waan barbaadde jechuu dandeessa. Ani maxxansa kanaaf jedhee ci jedhee moggaasee jira. Fuula armaan gadii fakkaatu kanatu isinitti mul’ata.
Adeemsa armaan olii kanaan CodeIgniter gara localhost yookiin server kee irratti feetaa jirtaa jechuudha. Amma immoo bootstrap buufachuu qabda. Isas gara marsariitii isaanii deemuudhaan buusi. Ergas booda extract godhi. erga gootee booda gara qabee porojeektii keetii deemi. tartiibni isaa akka armaan gadii kana fakkaata.
Hundee porojeektii kee irratti qabee/folder haaraa uumi. An assets jedhee jira. isin immoo maqaa barbaaddan kennuufii dandeessu. Amma booda tartiibni qabee porojeektii keetii kan armaan gadii kana fakkaata.
Amma faayila bootstrap kan buusuudhaan extract goote gara qabee assets jedhu keessatti galchi. Haala suuraa armaan gadii irratti mul’atu kana fakkaata qabeen porojeectii keessanii.
Amma faayila config bani gara qabee deemuudhaan. Faayilicha akka armaan gadii kanatti sirreessi.
$config['base_url'] = 'http://localhost/ci';
Amma gara kutaa head deemuudhaan koodota keenyaa fi bootstrap wal qunnamsiisuu qabna. kanas akka armaan gadii kanatti head tag keessatti galchuudhaan raawwanna.
Javascrip immoo akka armaan gadii kanatti galchitu
Amma guutumatti xumurtee jirta. Garuu immoo yeroo jalqabaaf bantu dogongora akka armaan gadii kanatu isin qunnama.
Akkamitti dogongora armaan olii kana bira darbuun danda’ama yookiin akkamitti dogongorri akkanaa kun uumame jechuu dandeessu. Dogongora kana bira darbuuf yookiin immoo too’achuudhaaf, gara qabee/folder application/config deemuudhaan faayila autoload.php jedhu banuudhaan akka armaan gadii kanatti sirreessi. Ergas booda porojeekticha kee iyya’aa irratti banuudhaan ilaali.
Amma haala milkaa’inaan CodeIgniter fi Bootstrap wal qunnamsiiftee jirta jechuudha. Porojeektii kee kana keessatti akka fedhii keetti itti fayyadamuu dandeessa jechuudha.
Maxxansa kana yoo jaalattan waliif qoodaa. yeroo gaarii isiniif haa tahu!
An Alifu jedhama. Marsariitii tana hawaasa keenyaaf tolchee jira. Barnootaa fi odeeffannoollee gara garaa irraa argatu jedheen yaada!
01, Shashemene, Ethiopiaarsiwebs@gmail.com0964121760
Barataa Technologies ©2018- 2019. All rights reserved.